Ningbo Dearevery အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခု, Ltd - ရင်သားကင်ဆာကျွေးမွေး, ကလေးဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သူများနှင့်စက်ရုံနို့တိုက်ကျွေး
ကလေး Straw ဖလား
ကလေး Silicon Bottle သ
ကလေး PPSU / PP Bottle သ
manual ရင်သား Pump
Us- Choose -Why
DEAREVERY အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကိုလန်ဒန်, အင်္ဂလန်အခြေစိုက်ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အများစုမှာဒီတော့အပေါ် FDA က, LFGB, အီး, CCC, CQC, CPC, ROSH နှင့်တူသော, သက်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသည်။
DEAREVERY အမြဲတည်သောအစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွန်အားကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုမှတိုးတက်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ဂုဏျတငျ။
Dearevery ဟာ FDA ကအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သောမိခင်နှင့်မွေးကင်းစကလေးထုတ်ကုန်၏လယ်ပြင်သို့ Tritan ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပေးသည်။
အောက်ပါအကြောင်းကို Gygiene ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကသင်ပိုကောင်းနားလည်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
အောက်ပါ Pacifier related အကြောင်းပါ။ ငါကသင်ပိုကောင်းနားလည်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကလေး Feefing Bottle သ
အဖုံးနှင့်အတူလက်စွဲ Breastmilk Pump
dual စုတ်ယူခြင်းမိခင်နို့တိုက်ကျွေးရင်သား Pump
Ningbo DEAREVERY လျှပ်စစ်နည်းပညာ Co. , Ltd မှမိခင်နှင့်မွေးကင်းစကလေးထုတ်ကုန်အတွက်အထူးပြုစက်ရုံတစ်ရုံဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ဒါအပေါ်ရင်သားကင်ဆာစုပ်စက်, နို့တိုက်ကျွေးရေးဇွန်း, ရင်သားနို့သိမ်းဆည်းခြင်း, ကလေးပုလင်းများနှင့်ထုတ်လုပ်အပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် CPC လက်မှတ်ရှိသည်။ ထိုထုတ်ကုန်ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူတင်ပို့ခဲ့ကြသည်။
ဘယ်လိုအများကြီးဖော်မြူလာ My Baby Feed ရန်
ရင်ပတ်ကိုစုပ်စက်မိခင်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအထောက်အဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ပတ်ကိုစုပ်စက်ကိုအသုံးပြုကြသူလူအတော်များများကအလွန်အဆင်ပြေသည်ကိုသိမှတ် ...
1, non-အဆိပ်အပျော့။ အဘယ်သူမျှမအနည်းတစ်ဦးကမျှအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တ္ထုများပါရှိသည်, ပုလင်းပျော့ဖြစ်ပါသည်, ကလေးရဲ့အံသွားနှင့်ခံတွင်း mucosa ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်, ကိုချိုးဖျက်မနိုင် ...
ကလေးတစ်ဦးဆီလီကွန်ဇွန်းကို အသုံးပြု. လား?
သူကလေးရဲ့ပထမဦးဆုံးဇွန်းပိုကောင်းတဲ့အစားအစာ-grade ကိုဆီလီကွန်အပျော့ခေါင်းကိုဇွန်းဖြစ်ပါတယ်။ silicone pacifiers တစ်ဘုံကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ texture အတွက်ပျော့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့်ကလေးရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသွားဖုံးကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်။
ဖုန်းနံပါတ်: +86 18968288927
ကြှနျုပျတို့၏ website မှကြိုဆိုပါ၏! ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် pricelist အကြောင်းကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့ကိုသင့်အီးမေးလ်ထားခဲ့ပါကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့ကို 24 နာရီအတွင်းအဆက်အသွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
2018 Ningbo Dearevery အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ Co. , Ltd All Rights Reserved @ မူပိုင်။ links Sitemap RSS XML